Global Voices teny Malagasy » Bangladesh : Herisetra Ara-Politika, ‘Firy ny Maty Vao ho Afa-Po Ry Zareo ?’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Desambra 2013 10:14 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
[Mankany amin'ny tranonkala amin'ny fiteny Bangla ny rohy rehetra raha tsy misy toro-marika.]
Manana akony mahafaty  eo amin'ny mponina ny krizy politika mahery vaika miseho any Bangladesh amin'izao fotoana izao, izay maro no efa nizaka ny vokatr'ireo andianà fanafihana noho ny hetsika ara-politika tamin'ny herin'andro lasa, toy ny fanipazana baomban-tsolika taminà fiara fitaterana feno mpandeha tamin'ny 28 Novambra tany Shahbag, akaikin'ny afovoan-tanàna any Dhaka.
Nahafaty olona telo io fanafihana io, izay 10 taona ny iray, ary 15 hafa naratra mafy. Nisy fanafihana hafa tahaka izany, nahafatesana olona maherin'ny 50 ary naharatrana olona 2.000  nanerana ny firenena.
Nanomboka io fitroarana herisetra io taorian'ny nilazan'ny Komity misahana ny fifidianana any Bangladesh tamin'ny faran'ny volana Novambra fa atao amin'ny 5 Janoary 2014 ny fifidianana solombavam-bahoaka. Notsipahin'ireo antoko mpanohitra —Antoko Tia Tanindrazana Bengladesh sy ny antoko Jamaat-e-Islami any Bengladesh— ilay datim-pifidianana ary mitaky ny fametraham-pialàn'ny Piraiminisitra sy ny fanatontosana ny fifidianana amina governemanta tsy mitongilahila izy ireo.
Nivadika ho herisetra sy fametrahana sakana amin'ny làlana ilay hetsi-panoherana vokatr'izany- notsipazana baomban-tsolika ny fiara feno mpandeha ary voa tamin'izany ihany koa ny fiaran-dalamby, ka nahafatesana olona. Mpitarika maro avy ao amin'ny mpanohitra no voasambotra nandritra ilay hetsika noho ny fiampangana maro samihafa, fa hatramin'izao dia tsy mbola voasambotry ny manam-pahefana ny tompon'andraikitra mivantana nahatonga ireny faty olona ireny. Maro koa ireo mahery fo avy amina antoko no maty nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana.
Ary isan'andro dia misedra ny mafy noho ny hasosorana ny mponina. Maty tamin'ny herin'andro lasa teo ry Monir , Sumi , Montu Paul , Asad Gazi , Nasima Begum, Abul Quashem  sy ny maro hafa.
[Fampitandremana : sary mamoa-fady]
Marary iray izay notsipazan'ny olon-tsy fantatra baomban-tsolika tao anaty fiara fitaterana, tsaboina ao amin'ny sampam-pianarana ho dokotera any Dhaka. Sary avy amin'i Naveed Ishtyak. Copyright Demotix (28/11/2013)
Voasoratra ato amin'ity tatitry ny gazety mpiseho isan'andro Prothom Alo ity ny andro iray nisiana herisetra ara-politika :
Zoma [29 Novambra, 2013] vao maraina. Teo amin'ny làlam-ben'i Dhaka-Bogura. Fiara 500 eo ho eo no nitohana vokatry ny fanakanan-dàlana nataon'ny mpanao fihetsiketsehana. Tampoka, nisy nitoraka taminà zavatra kely nipoaka sy biriky ry zareo. Herisetra faobe. Tsy misy famindram-po ho an'ny zaza amam-behivavy. Maherin'ny 100 ireo mpandeha naratra.
Zoma vao maraina. Nisy nanafika ny fiara mpandeha alina Feni-Dagonbhuiyan. Nodarohana sy norobaina ireo mpandeha. Nodorana ilay fiara rehefa avy norarahana solika fandrehitra.
Zoma amin'ny 1 maraina. Dewanpara ao amin'ny Làlana Rajshahi-Naoga. Fiarabe misy vary no nodorana. Voatafika ihany koa ny fiara mitondra fanafody.
Ireto ny zava-niseho tao anatin'ny fanakanana 72 ora nataon'ny [ Antokon'ny tia Tanindrazana Bangladesh sy ny Jamaat-e-Islami Bangladesh] firaisan'ny antoko 18. Tsy misy zava-baovao amin'ny hetsi-panoherana. Ny herisetra sy ny fanafihana no mibahana amin'izany.
Any amin'ny toerana toa an'i Sitakunda, Comilla ary Chandpur, tranga mahazatra rehefa misy sakana ny fanafihana tsy misy fanavahana na fiara fitateram-bahoaka na fiara fanaterana entana io. Fanafihana voarindra aminà vahoaka tsy nampiomanina. Politika tsy voafehy eny an-dàlambe.
Iray andro ihany ary izany. Hatramin'ny 01 Janoary 2013, dia nahafatesana olona 348 ny herisetra politika.  Nisy fihetsiketsehana sy fanamelohana nanerana ny firenena noho ny fandatsahan-drà. Nanoratra sehatra fitoraham-bilaogy Bangla, Amarblog i Fatema Johra  mpitoraka bilaogy :
মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছে আমাদের দেশে।একটার পর একটা নিরীহ মানুষ যুক্ত হচ্ছে সেই মৃত্যুর মিছিলে। মাঝে মাঝে মনেহয় এই বুঝি আমিও যুক্ত হলাম সেই মিছিলে, এই বুঝি আমার স্কুল পড়ুয়া ভাইটা সেই মিছিলে হেঁটে যাচ্ছে।যতক্ষণ পর্যন্ত ভাইটা না ফেরে ততক্ষণ পর্যন্ত কান পেতে রাখি দরজায়, অপেক্ষায় থাকি কখন ও এসে বলবে- আপু, দরজা খোলো।আর অস্থির হয়ে ভাবতে থাকি ঠিক মতো ফিরবে তো ভাইটা! নাকি মনিরের মতো….আবার, হঠাৎ বাবার ফোন আসলে মনেহয়- বাবাই তো! নাকি অন্য কেউ বাবার মিছিলে যাবার খবর দিতে ফোন করল! কিন্তু যখন ফোনটা ধরে শুনতে পাই-“হ্যালো মামুনি” তখন মনটা শান্ত হয় এই ভেবে- নাহ, বাবা ভালোই আছে। কিন্তু তারপরও এক অসহ্য আতঙ্ক নিয়ে কাটাতে হয় সারাদিন,বাবা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবে তো!
Mitety ny firenentsika ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Maro ireo olona tsy manan-tsiny ny lasan'izany. Indraindray aho mieritreritra hoe mety ho lasa amin'izany koa aho amin'ny fotoana rehetra, na ny zandriko lahy. Miandry amim-pitaintainana ny fodiany aho isan'andro, miandry ny antsony…” voahay aho ranabavy”. Antenaiko fa tsy hiafara tahaka an-dry…. Monir izy. Maneno indray ny finday …. dia mieritreritra aho hoe … i Dada izany…. na olon-kafa hilaza vaovao ratsy momba an'i Dada.
Ny herisetra nandritra ilay hetsi-panoherana notaon'ny Jamaat-e-Islami sy ny mpanara-dia avy ao amin'ny Islami Chhatra Shibir dia nahasimbana fiara betsaka tao Dhanmondi any Dhaka. Sary avy amin'i Sk Hasan Ali. Copyright Demotix (1/12/2013)
Nametra-panontaniana ilay mpitarika ny antoko ankavia sady mpahay toekarena, hoe mpandalo tsy manan-tsiny firy no tsy maintsy hizaka izao :
Herisetra miaro rà mandriaka no hitazonana ny toeran'ireo hitantana ny firenena. Lalaovina ny firaisana tsikombakomba. Isan'andro dia misy olona dorana, olona vonoina ! Teny an-dàlana hitady ny hanin-ko haniny ny ankamaroan'ireny olona ireny nandritra ilay sakan-dàlana. Tsy misy atontan'isa milaza ny isan'ireo izay very ratsam-batana noho ny ratra. Tsy misy dikany ve ireny aina ireny ? Tena tendan-kanina tokoa ny mahery.
I Shariful Hasan,  mpiserasera amin'ny Facebook no nanery ny antoko politika mba hamarana ny hatezerana sy hamela ny olona hiaina malalaka :
Halako ny fanaovana politika maloto mba hijanonana eo amin'ny fitondrana. Tsy ankasitrahako ireo izay mandoro ny mpiray tanindrazana aminy. Laviko ireo izay mandrava ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenenay. Ny angatahako amin'ny mpanao politika tia tanindrazana : Aza afatotrareo amin'ny adinareo eo amin'ny fitondrana ny olona. Te-hiaina amim-pilaminana izahay.
Asehon'i Sardar Faruk  ny fitaintainan'ny olona amin'ny fandehanany miasa isan'andro :
Mandeha ambany alokaloky ny fahafatesana izahay rehefa mankany am-piasana. Nodinihiko ireo mpiara-mandeha fiara tamiko tamin'ity maraina ity. Tsy nisy niresaka, fa mijery any am-baravarankely miomana ny amin'izay zavatra mety hiseho. Tahaka ny hoe tanaty fiara fitaterana ireo gadra voaheloka ho faty aho.
Mbola averin'ny mpitoraka bilaogy Arif Jebtik  ihany ny tahotra amin'ny fanipazana baomba ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana :
Tokony ho any amin'ny tobin'ny Oniversite any Dhaka ny vadiko ; tokony hijery ny fifidianan'ny Firaisan'ny Mpanao gazetin'i Dhaka aho. Mazàna dia miaraka izahay rehefa mitovy ny lalana aleha. Tsy niavaka tamin'izany ny tamin'ny maraina.
Fa nitopy tany amin'ny zanakay matory ny masonay rehefa handeha izahay, dia hoy aho “‘ndeha hisara-dàlana.” Amin'izao fotoan-tsarotra izao, tsy tsara ny miara-maty. Raha toa ka misara-dàlana isika, raha sanatria ka ho avy ‘zay loza, fara-faharatsiny mba velona ny anankiray amintsika hikarakara ny taranatsika.
Ampangain'ny Bilaogera Lina Ferdous  ho mikendry ny hianika amin'ireo fatin'olona ny mpanao politika mba hahafahany mipetraka eo amin'ny fitondrana :
Lehilahy firy no tokony ho faty mba hahombiazan'io sakana io… Firy no tokony ho faty mba hanaitra ny maha-olona ?..
Raha tokony ho may tsirairay isika dia ndeha hiara-may.. Avelao ry zareo handravaka ny seza fiandrianany amin'ny afon'ny fandorana antsika…
Anontanian'i Falguni Mitu ‏ao amin'ny Twitter :
Firy ny olona may vao ho afa-po ry zareo ? Firy ny rà latsaka tian-dry zareo ho hita mialohan'ny hijanonany ? #JS_polls  #shahbag 
— Falguni Mitu (@mashamiah) 29 Novambra 2013 
Nibitsika ihany koa i Dipon Mitra sy i Anulikhon :
RT @AnuLikhon May ny fiara fitaterana iray any Dhaka http://t.co/dSyGUmWeQ1  Azo atao ny mandoro fiara fitaterana tsy misy olona, fa nahoana no tsy maintsy tafihana ny mpandeha ?
Nanontany ireo mpanao politika ny mpitoraka bilaogy Sohail Jafar (@banglapress ) hoe maninona raha ny tenany no dorana fa tsy ny olon-kafa :
Afaka mandoro ny tenany ireo mpitarika ny mpanohitra mba hahatongavany amin'izay tiany….. http://t.co/BPRQK6f1Et 
Ambaran'ireo mpitarika ny mpanohitra ao amin'ny lahateny politikany fa noraisiny izao fepetra izao ( sakan-dàlana sy fikomiana) mba hananganana demokrasia. Notsikerain'i Mahbubul Alam Shohag (@Mahaburs ) [bn] io fomba fijery io :
Tsy misy fotoana ho an'ny sarintsarinà demokrasia. ‘Ndao samy hanavotra ny tenantsika aloha.
Nametra-panontaniana ny mpanao gazety J. E Mamun (@mamunzi ) :
Tena izy ve ity demokrasia ity ? ny antoko politika izay mampivily lanana ireo fiaran-dalam-by amin'ny fanapoahana ny làlam-by, fandorana fiara fitaterana….
Shima, 6 taona, may tamin'ny fanafihana ny fiara fitaterana nisy azy rehefa notafinin'ny mpanohitra izay tezitra fa mbola miasa ihany ny olona nandritra ny fiokoany. Sary avy amin'i Mamunur Rashid. Copyrght Demotix (18/11/2013)
Nomelohin'ny mpanao gazety Shaugat Ali Sagor  tao amin'ny Facebook ny governemanta :
Nahoana no tsy samborin'ny governemanta ireo izay manakorontana amin'ny alàlan'ny fandoroana olona sy manongotra ny làlam-by ? Raha toa ka tsy vitany ny miaro vahoaka dia inona izany no antom-pisian'ny governemanta ? Raha toa ka tsy voasambony ireo mpampihorohoro, dia tokony hiala tsiny izy ary hametra-pialàna tsy ho eo amin'ny fitondrana. Tsy tokony ho tohizana ny fanakorontanana amin'ny anaran'ny politika.
Miangavy ny olon-tsotra i Suman Kaisar hanomboka ny fikomiana :
Tsy misy intsony ve olona miahy ny maha-olona? Efa lasa biby avokoa ve isika rehetra ? Tsy misy vondrona na fikambanana ? Manery ny vahoaka aho mba handray an-tanana ny firenena. Tohero ireo izay manaporofo fa hetsika politika ny fandorana olona tsy manan-tsiny.
Tohero amin'ny herinareo rehetra ry zareo. Ireo izay mandoro ny raintsika, ny renintsika, ireo iray tam-po amintsika sy ireo havantsika, tohero izy ireo. Mandra-pahoviana no handosiranareo ? Raha tsy afaka manao na inona na inona ianareo, dia rorao tsotra izao izy. Tsy mba ho vitanao ve izany ?
Misy vondrona sy fikambanana samihafa mikarakara fanoherana tsotsotra ireo fanafihana olon-tsotra ireo. Nisy hetsika Facebook hoe “Ajanony ny fandorana olona amin'ny adin-tsezanareo “  nosokafan'ny vondrona Citizens Resisting Violence (Mponina Manohitra ny Herisetra). Mikarakara fivoriam-panoherana any Shahbag ry zareo amin'ny 3 Desambra 2013.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/25/55296/
 akony mahafaty: http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/11/political-protests-bangladesh-turn-violent-20131126215913569588.html
 baomban-tsolika taminà fiara fitaterana : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2515040/Bangladesh-bus-petrol-bomb-attack-leaves-18-people-horribly-burned.html
 Shahbag, : https://en.wikipedia.org/wiki/Shahbag
 olona telo : http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2013/dec/04/one-more-shahbagh-arson-victim-dies
 nahafatesana olona maherin'ny 50 ary naharatrana olona 2.000: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/bangladesh-mired-political-violence-201312313393225386.html
 5 Janoary 2014 : http://www.samakal.net/2013/11/26/22497
 Notsipahin'ireo : http://www.globalpost.com/dispatch/news/xinhua-news-agency/131202/bangladeshs-main-opposition-looks-all-set-boycott-parliament
 fiaran-dalamby, : http://bdnews24.com/bangladesh/2013/12/04/4-dead-as-trains-derail
 voasambotra nandritra ilay hetsika : http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2013/11/131108_mh_moudud_arrest.shtml
 Montu Paul: http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=15&dd=2013-11-17&ni=154837
 Asad Gazi: http://independent24.tv/?p=91797
 Nasima Begum, Abul Quashem: http://www.jugantor.com/current-news/2013/11/14/41795
 tatitry ny gazety mpiseho isan'andro Prothom Alo : http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/87355/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%87_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE
 nahafatesana olona 348 ny herisetra politika.: http://ibnlive.in.com/news/bangladesh-opposition-bnp-enforces-fresh-72hour-blockade-across/436952-2.html
 Fatema Johra: https://www.amarblog.com/fatema-tuz-zohora-95/posts/175441
 Nametra-panontaniana : https://www.facebook.com/anumuhammadbd/posts/10201366430025267
 Shariful Hasan,: https://www.facebook.com/hasan.shariful/posts/10151808949051342
 Sardar Faruk: https://www.facebook.com/sardarfaruque/posts/588767797843807
 Arif Jebtik: https://www.facebook.com/jebtik/posts/10151759849761606
 Lina Ferdous: https://www.facebook.com/lina.fardows/posts/10152041503730071
 November 29, 2013: https://twitter.com/mashamiah/statuses/406469764014690304
 November 28, 2013: https://twitter.com/light_0n/statuses/406063289437675520
 November 12, 2013: https://twitter.com/banglapress/statuses/400395916810522625
 November 30, 2013: https://twitter.com/Mahaburs/statuses/406688283230732288
 November 27, 2013: https://twitter.com/mamunzi/statuses/405673051532316672
 Shaugat Ali Sagor: https://www.facebook.com/shaugat.sagor/posts/10152031740651083
 hanomboka ny fikomiana : https://www.facebook.com/sumon2sep/posts/676345662397649
 Ajanony ny fandorana olona amin'ny adin-tsezanareo “: https://www.facebook.com/events/398901020212735/